आइपिएलः मुम्बईलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै चेन्नाईको विजयी सुरुवात | Diyopost
काठमाडौं, ४ असोज । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेटमा चेन्नाई सुपर किंग्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा चेन्नाईले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सलाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो।
युएईको अबुधाबीमा शनिबारदेखि सुरु भएको उद्घाटन खेलमा मुम्बईमाथि चेन्नाईले सहज जित निकालेको हो। १६३ रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको चेन्नाईले ४ बल बाँकी छँदा ५ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टायो। चेन्नाईको जितमा आम्बती रायुडु र फाफ् डु प्लेसिसले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। आम्बतीले ४८ बलमा ६ चौका र ३ छक्काको मद्दतमा ७१ रन बनाए। फाफ् डु प्लेसिसले अविजित ५८ रनको योगदान दिए।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले २० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा १६२ रन बनाएको थियो। मुम्बईका लागि सौरभ तिवारीले ४२ रन बनाउँदा डि कक्ले ३३ रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ चेन्नाईका लंगी नगिदीले ३ विकेट लिँदा रविन्द्र जडेजा र दीपक चाहारले समान २–२ विकेट लिए।
आइपिएलको दोस्रो दिन आइतबार पनि एक खेल हुँदैछ। सन्दीप लामिछानेआबद्ध टिम दिल्ली क्यापिटल्सले किंग्स इलाभेन पञ्जाबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।
अवैध लागुऔषध सहित २ जना पक्राउ
बञ्चरो प्रहार गरी हत्या गरेको अभियाेगमा ‘टल्के’ पक्राउ
‘प्रहरी हुँ’ भन्दै व्यवसायीबाट रकम असुली गर्ने युवक पक्राउ !
थप १९ सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय ९४ पुग्यो !
पछिल्लो २४ घण्टामा १६ हजार ५९८ जनाको पीसीआर परीक्षण,३ हजार ७ सय ४९ जनामा पुष्टि !